भुलेर पनि नखानुहोस् महिनावारीको समयमा यी ६ चिज, नत्र हुन्छ इन्फेक्सनको खतरा ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / भुलेर पनि नखानुहोस् महिनावारीको समयमा यी ६ चिज, नत्र हुन्छ इन्फेक्सनको खतरा !
भुलेर पनि नखानुहोस् महिनावारीको समयमा यी ६ चिज, नत्र हुन्छ इन्फेक्सनको खतरा !
admin August 8, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 67 Views
बैंकका कर्मचारीको पनि कसरी विश्वास गर्नु ! प्रहरीमा यस्तो उजुरी परेपछी खुल्यो पोल
आफ्नो सास आँफैलाई गनाउँछ ? उसोभए मात्र रातमा यो काम गर्नुहोस्
काठमाडौँ । किशोरास्था पार गरेसँगै महिलामा महिनावारी सुरु हुन्छ। २८ दिनको अवधिमा हुने महिनावारीका बेला रगत बग्ने भएकाले थकान महसुस हुन्छ, साथै स्वास्थ्यमा पनि शिथिलता आउन सक्छ।
तर, महिनावारी भएका बेला कतिपय कुरा अन्जानवश गरिन्छ। के गर्न मिल्ने के गर्न नमिल्ने भन्ने बारे थाहा नहुँदा कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि गरिरहेका हुन्छौं। तसर्थ महिनावारी भएको समय निम्न कामहरु भुलेर पनि गर्नुहुँदैन:
धेरै महिलाहरूलाई पीरियड्सको समयमा धेरै दुखाइ हुन्छ किनभने यस समयमा हाम्रो शरीरमा इस्ट्रोजेनको स्तर घट्छ। जुन महिलाहरुलाई यो पहिलोपटक भएको छ उनीहरुलाई थाहा हुन्छ कि यो कति पेनफुल हुने गर्दछ।
त्यसैले धेरै महिलाहरू यस समयमा डाक्टरमा जान्छन्। र यस अवधिमा, तपाइँ वैक्सिंग गर्ने बारेमा सोच्दै नसोच्नुहोस् । जब तपाईको इस्ट्रोजेनको स्तर पहिलाको जस्तै हुन्छ तब तपाई वैक्सिंग गराउन सक्नुहुनेछ।
महिनावारीको पीडाबाट बच्न क्याल्सियम खाने गर्नुहोस्। तर दूध वा दूधबाट बनेको कुनै पनि चीज, जस्तै पनीर दही खानु हुँदैन। महिनावारीको समयमा यी सबै चिज खानाले महिनावारमिा हुने पीडा, दुखाइ झन् बढाउन सक्छ किनकि एराकाडोनी एसिड समावेश हुन्छ।
यसको सट्टामा, तपाई बदामको दूध पिउनुहोस् वा नरिवलको दूधबाट बनेको दही खानुहोस्, यसले तपाईंलाई क्याल्सियम पनि दिन्छ र कुनै पीडा पैदा पनि गर्दैन। यस बाहेक, तपाईं फलफुलहरू खान सक्नुहुनेछ वा उनीहरूबाट बनेका जुस पनि पिउन सक्नुहुन्छ।
महिनावारीका बेला सरसफाइमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। जथाभावी कपडाको प्रयोग गर्नुहुँदैन । महिनावारीका बेला स्यानिटरी प्याड वा नरम कपडा मात्र प्रयोग उत्तम मानिन्छ।
स्यानिटरी प्याड वा नरम कपडा फेरि रहनुपर्छ। एउटा स्यानिटरी प्याड राखेको ६ घण्टा भएपछि अर्को स्यानिटरी प्याड फेर्नुपर्छ ।
महिनावारी भएको बेला सकेसम्म दिनहुँ नुहाउनु पर्छ। र, गोप्य अंग राम्ररी सफा पानीले पखाल्नुपर्छ ।
महिनावारीको बेला प्रयोग भएका कपडा साबुन पानीले राम्ररी धोएर घाममा सुकाउनुपर्छ ।
स्यानिटरी प्याड प्रयोग गरिसकेपछि भने नबिर्सीकन साबुन पानीले हात धुनुपर्छ ।
महिनावारी भएका बेला पौष्टिक तथा झोलिलो खानेकुरा बढी खानुपर्दछ ।
Previous प्रोटिनको मात्रा धेरै हुनु पनि शरीरका लागि हुनसक्छ घातक, देखिन्छन् यी ५ गम्भिर समस्या !
Next धोका दिएको भन्दै विबाहकै दिन बेहुलीले गरिन् बेहुलाको यस्तो रामधुलाई
यस कारण हुन्छ मिर्गौला सुन्निने समस्या, यी संकेतलाई भूलेर पनि गर्दै नगर्नुहोस् वेवास्ता
काठमाडौँ । मिर्गौलाको प्रमुख काम रगतबाट विकारयुक्त पदार्थ र अतिरिक्त तरल पदार्थ छानेर शरीर बाहिर …